Muxuu Erdoğan Ula Jeedaa “Mursi Ajashiisa Ma Dhamaan”? | Xaqiiqonews
Muxuu Erdoğan Ula Jeedaa “Mursi Ajashiisa Ma Dhamaan”?
Madaxweynaha Turkiga Rajajib Dayib Erdoğan ayaa sheegay in dalkiisa uu sameyn doon wax walbo oo ay ku qaadto sidii loola xisaabtami lahaa dadkii ka dambeeyey geerida Maxamed Mursi
Erdogan ayaa yiri “Mursi kuma dhiman ajal, ee waa la dilay”
Isagoo sii raaciyey “Waan ka xunahay Mursi 20 daqiiqo ayuu dhulka rafanayey, wax gurmad ahna looma sameyn”.
Erdogan ooo carro qanjaha dhaaftay ayaa yiri “Kuwa dhahay Erdogan waxaa sugaya masiirka Mursi oo kale waa kuwa ku caqli ah Siisii, kama cabsaneyo dadka noocaas ah, maxaa yeelay karfinta horay ayaan u soo qaadanay”.
Geerida Mursi ayaa wadna qabadweyn ku noqotay Erdogan oo ka mid ah dadka ugu cad cad ururka Ikhwaanul-Muslimiin, Erdogan ayaana bilaabay dadaalo isagoo kaalmo ka dalbaday Ururuka Iskaashiga Islaamka, si loo xisaabtamo waxa uu ugu yeeray “Dambiilayaasha”